StumbleUpon သည်ကျွန်ုပ်၏ Blog ကိုဆက်လက်ကျွေးသည် Martech Zone
StumbleUpon သည်ကျွန်ုပ်၏ Blog ကိုဆက်လက်ကျွေးသည်
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 18, 2008 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ယနေ့ညတွင်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အတွက်ရည်ညွှန်းထားသောဆိုဒ်အချို့ကိုလေ့လာပြီးအခြားမည်သည့်အရာထက်မဆိုထူးခြားသည့်စာရင်းအင်းကိုမကြည့်နိုင်တော့ပါ။ StumbleUpon ငါ၏အ site ကိုမှအသွားအလာအများကြီးမောင်း! ဝက်ဘ်ပေါ်တွင် bookmark ပြုလုပ်ခြင်းဆိုဒ်များစွာရှိသည်။ သို့သော် StumbleUpon တွင်အခြားမည်သူမှမရှိသည့်မဟာဗျူဟာမြောက်အားသာချက်တစ်ခုရှိသည် - ၎င်းတို့သည်သက်ဆိုင်သောအကျိုးစီးပွားဖြင့်အချိတ်အဆက်များပေးသည်။
သင် load တဲ့အခါ StumbleUpon toolbar ကို (မင်းကို အကြွင်းမဲ့ သင့်တယ်) ထိမိ။ လဲ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်တွင်သူတို့ကိုလက်မတစ်ခုသို့မဟုတ်လက်မလျှော့ချပါ။ သင်သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုကိုတင်ပြသည်နှင့်အမျှ StumbleUpon မှသင့်အားနောက်တစ်ကြိမ်ပို့ပေးသောဆိုဒ်များကသင့်အားလက်မလျှော့စေလိုသောအချက်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အသိဉာဏ်ရှိသည့်ထူးခြားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
StumbleUpon ကငါ့ကိုပို့ပေးသော than ည့်သည်အရေအတွက်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်အလွန်နိမ့်သောနိမ့်သောနှုန်းဖြင့်ရည်ညွှန်းသောဆိုဒ်ဖြစ်သည်! ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ပို့သောလူထက်ဝက်ခန့်သည်အခြားပို့စ်တစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်အခြားရည်ညွှန်းသောဆိုဒ်များထက်နိမ့်ကျသောနှုန်းအလွန်နိမ့်သည်။
မတူဘဲ slashdot, digg, နှင့်အခြားအဓိကမှတ်သားနိုင်သည့်အင်ဂျင်များဖြစ်သော StumbleUpon သည်သင်၏ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်၏အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေမည့်အသွားအလာကိုပေးသည့်“ Midas touch” ကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ သင်၏ visit ည့် likes ည့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်မနှစ်သက်မှုများပေါ်တွင်သူတို့တီထွင်ထားသောပရိုဖိုင်ပေါ်အခြေခံသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့အခြားရည်ညွှန်းကိုးကားသူတစ် ဦး ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ bitbox။ ကျွန်တော့်ကိုသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ထဲကိုထည့်သွင်းပေးတာထက်ပိုပြီးအသွားအလာအများကြီးပို့ပေးပါတယ် သင်ဟာလေ့လာသူတစ်ယောက်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါက Bittbox site ကိုစစ်ဆေး။ ၎င်းတို့အစာကျွေးရန်မှတ်ပုံတင်ပါ။ ၎င်းသည်အသေးစိတ်သင်ခန်းစာများနှင့်တန်ချိန်များစွာ download ပြုလုပ်ထားသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော site တစ်ခုဖြစ်သည်။
သတိပြုပါ တွစ်တာ အဆိုပါရည်ညွှန်းတက်တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးသည်! သင်၏ Twitter တွင်တင်ရန်အတွက် Twitterfeed တစ်ခုသို့မဟုတ် autoposting ယန္တရားတစ်ခုကိုထည့်သွင်းမထားပါကယနေ့သင်လုပ်ရမည်။
သင်၏ ၃ မိနစ်စာဗီဒီယိုသည် ၅၀″ HDTV ကိုရနိုင်သည်
19:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 45
သင့်ကိုယ်ပိုင် စာမျက်နှာများကို ဤရင်းမြစ်များသို့ ပို့စ်တင်ခြင်းအပြင် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးအကြောင်း Stumble သို့မဟုတ် Twitter ကို အချိန်ယူပါ။ မတောင်းဆိုဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် မကြာခဏ ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်အကြောင်း အခြားသူတစ်ဦးမှ ပြောဆိုခြင်း၊ Retweets၊ Stumbles သို့မဟုတ် Diggs များပြုလုပ်သောအခါတွင် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိပါသည်။
1:2010 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 26
လူမှုရေး bookmarking ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တန်ဖိုးကိုအမြဲမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ StumbleUpon မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်သို့ အသွားအလာ တိုးလာသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း၊ လူများက ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသည့်အတွက် အံ့သြမိပါသည်။
1:2010 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 31
@chuckgose သဘောမတူပါဘူး။ တချို့လူတွေက မတူညီတဲ့ ကိရိယာတွေကို သဘာဝအတိုင်း ဆွဲငင်အားကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သို့သော် ထိုနေရာများ၏ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဆာလောင်နေသော လူအုပ်ကြီးရှိသည်။ ဤနေရာတွင် စာညှပ်တစ်ခုတင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကို မောင်းနှင်နိုင်ပါက၊
1:2010 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 58
hits များကို အားကိုးရသော်လည်း stumble ကိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့ထဲမှ မည်မျှသည် သင့် site နှင့် အမှန်တကယ် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။ အသွားအလာကို ညွှန်ပြသော အခြားမည်သည့်အရာမဆို သုံးဆမျှ မယုံနိုင်လောက်အောင် မြင့်မားသော နံပါတ်များဖြင့် ပေါ်လာသည်ကို ကျွန်ုပ် သတိပြုမိသော်လည်း မှတ်ချက်အရေအတွက်မှာ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပေါ်ရှိ ပျမ်းမျှအချိန်သည် အမှန်တကယ်ပင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ အသွားအလာဆိုတာ အသွားအလာဆိုတာ သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လူတွေက ဆိုက်ကို ဝင်တိုက်ပြီး အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ထွက်သွားပြီး တခြားစာမျက်နှာတွေကို အမှန်တကယ် မသွားဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲ…
စိတ်ထဲမှာ တစ်ချို့ အတွေးတွေချည်းပဲ ၊ မင်းရဲ့ အတွေးတွေ က မင်းရဲ့ အတွေးတွေကို ကြားချင်နေတာပဲ 🙂